'कोभिड–१९ का सूचना एउटै वेबबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट' - साक्षी खबर 'कोभिड–१९ का सूचना एउटै वेबबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट' - साक्षी खबर
चैत्र २४, २०७६ | ०० पटक पढिएको | साक्षी खबर
१४ चैत, काठमाडौँ / कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । आजदेखि कोभिड–१९ का आधिकारिक सूचना एकै ठाउँबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ । सँगै मोबाइल एप्समार्फत क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणालीको समेत शुरु गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त वेबसाइटको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लगइन गरेर सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री थापाले उक्त सूचना प्रणालीले विपद्को सामना गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वले भोगेको महासङ्कटको अवस्थामा नेपालले पनि बेहोर्नुपरिरहेको सन्दर्भमा सञ्चालनमा आएको व्यवस्थित सूचना प्रणालीले विपद्को सामना गर्न मद्दत मिल्ने उनले बताए